तिनाउ विकास बैंक को नाफामा भारी गिरावट, प्रति शेयर आम्दानी कति ?
April 18, 2018 Aagan Post0Comments
काठमाडौँ । तिनाउ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रू. ५ करोड ३८ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा २ करोड ४१ लाख रुपैया कम हो । बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा घटेपछि खुद नाफा घट्न पुगेको हो । बैङ्कले सो अवधिमा रू. ४ अर्ब ४८ करोड निक्षेप संकलन गरी रू.३ अर्ब ८० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैङ्कको सिडी रेशियो ७४.२० % रहेको छ । समिक्षा अवधिमा बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. ५० करोड रहेको छ भने जगेडा कोष रू. १२ करोड ९७ लाख रहेको छ । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी ३८ करोड ९० लाख रहेको छ, अघिल्लो बर्ष यहि अबधिमा करिब ३० करोड रहेको थियो । सञ्चालन मुनाफा करिब ७ करोड रहेको छ, गत बर्ष को सोहि अबधिमा रू. ११ करोड ८७ लाख बढी रहेको थियो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.३७ प्रतिशत रहेको छ । प्रति शेयर आम्दानी रु.१४.१७ रहेको छ ।
मन्जुश्री फ़ाइनान्स लिमिटेड चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा करिब ५ करोड ४६ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा फ़ाइनान्स को नाफा करिब ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा फ़ाइनान्सले झण्डै १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ ।
फ़ाइनान्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा ब्याज आम्दानी करिब ४८ करोड देखाएको छ भने ब्याज खर्च करिब ३७ करोड रहेको छ ।
फ़ाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा २.१३ % (प्रतिशत) रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा फ़ाइनान्स को निष्क्रिय कर्जा २.७१ % (प्रतिशत) रहेको थियो ।
यस्तै फ़ाइनान्सको सीडी रेसियो ७६.२३ रहेको छ ।
तेस्रो त्रैमासिक सम्ममा फ़ाइनान्सको चुक्ता पूँजी रू. ७२ करोड बढी रहेको छ । जगेडा कोषमा भने करिब १५ करोड रहेको छ । त्यसैगरी फ़ाइनान्सले सो अवधिमा निक्षेप करिब रू. ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोछ भने कर्जा लगानी करिब ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा बिस्तार गरेको छ ।
फ़ाइनान्सको प्रति शेयर आम्दानि १०.०६ (बार्षिक) रुपैयाँ रहेको छ ।
← बि.स.२०७५ बैशाख ५ गते । बुधबार । आजको राशिफल यस प्रकारका छन् :-
नेपाल ग्रामिण विकास बैंक अब लघुवित्त बित्तिय संस्था →
उन्नति माइक्रोफाइनान्सको सेयर कारोबार खुल्यो